Mpivady nandositra an-trano holandey vaovao nosamborina tamin'ny sidina nankany Espaina
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao farany mikasika ny Netherlands » Mpivady nandositra an-trano holandey vaovao nosamborina tamin'ny sidina nankany Espaina
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Crime • Vaovaom-panjakana • Vaovao farany mikasika ny Netherlands • Vaovao • People • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News
Miambina mafy i Holandy taorian'ny tranga am-polony mahery tamin'ny variana Omicron COVID-19 vaovao hita teo amin'ireo mpandeha amin'ny zotram-piaramanidina - talohan'ny nanaiky ny firenena 27 mpikambana ao amin'ny Vondrona Eoropeana handràra vonjimaika ny dia avy any amin'ny firenena fito atsimon'i Afrika tamin'ny zoma.
Nisy trangan-javatra nanaitra niseho tao Amsterdam Seranam-piaramanidina Schiphol tamin'ny sidina izay tokony hiainga ho any Espaina tokony ho tamin'ny 6 ora hariva ny alahady.
Teo am-piaingana ny fiaramanidina dia niditra tao anaty fiaramanidina ny polisy miaramila holandey ary nanala mpivady iray nandositra trano fandraisam-bahiny noho ny fiahiahiana ho mpitatitra fifindran'ny Omicron COVID-19 any Holandy.
Tsy navoaka ny mombamomba ireo mpivady voatazona, ary tsy fantatra mazava na voan'ny aretina izy ireo na natao confinement fotsiny ho fitandremana. Natolotry ny miaramila tamin'ny tompon'andraikitra ara-pahasalamana izy ireo mba halefa any amin'ny tobim-pitsaboana hafa.
Ny Netherlands dia mailo fatratra taorian'ny tranga ampolony mahery tamin'ny variana Omicron COVID-19 vaovao hita teo amin'ireo mpandeha amin'ny zotram-piaramanidina - talohan'ny nifanarahana ireo firenena 27 ao amin'ny Vondrona Eoropeana handràra vonjimaika ny dia avy any amin'ny firenena fito atsimon'i Afrika tamin'ny zoma.
Ireo rehetra tonga vao haingana avy any Holandy avy any Afrika Atsimo, ary koa avy any Botswana, Malawi, Lesotho, Eswatini, Namibia, Mozambika ary Zimbaboe, dia tsy maintsy nozahana sy natao confinement mandra-pahafantarana ny valiny, na dia efa vita vaksiny aza izy ireo.
Mpandeha 61 eo ho eo amin'ny totalin'ny 624 no nizaha toetra tsara ho an'ny COVID-19, noho izany dia nampitandrina ny National Institute for Health (RIVM) holandey fa "ny variana vaovao dia mety ho hita amin'ny santionany fitsapana bebe kokoa."
"Hifehy izahay raha mitandrina ireo fitsipika ireo izy ireo," hoy ny minisitry ny fahasalamana holandey Hugo de Jonge tamin'ny alahady, ora vitsy talohan'ny fikasana handositra.